Uphononongo lwe-Eufy Dual Camera Smart Doorbell | ndisuka kuMac
UJordi Gimenez | 28/04/2022 09:48 | Izixhobo
Siphethe entsha ezandleni zethu ikhamera yokhuseleko enentsimbi yocango eyakhelwe-ngaphakathi evela e-Eufy. Kubo bonke abo bangayaziyo ifemu ye-Eufy, sinokulumkisa ukuba yenye yeenkampani eziphantsi kwe-Anker, ke ngoko ke siza kuba nemveliso ekumgangatho ophezulu, eneziqendu ezigqwesileyo kunye nexabiso elifanelekileyo ngokuqwalasela ukhuphiswano oluthe ngqo.
Kule meko, into engcono kakhulu malunga nekhamera kukuba ukongeza kwintsimbi yomnyango ngokwayo, yongeza ikhamera yesibini egxininise ngokuthe ngqo emhlabeni.Ezweni lethu, oku kungabi luncedo kakhulu, kodwa e-United States, apho abathumeli bashiya iipakethe emgangathweni ngaphandle komnyango wethu kubaluleke kakhulu ukuba le khamera ikhombise phantsi emhlabeni.
Kodwa masihambe ngokwamacandelo kwaye siqale ngeyona nto ibalulekileyo esinika yona le Eufy utyikityo camera. Kwaye oku akukho nto ingaphezulu kwaye akukho nto incinci kunokuba ingongezi naluphi na uhlobo lobhaliso okanye iindleko ezongezelelweyo zokugcina yonke into ebonwa yikhamera ngexesha lokukhala kwentsimbi yokungena emnyango.
Kwaye sazi kakuhle ukuba zininzi iifemu ezithi, ukongeza ekuthengiseni ikhamera yokhuseleko ngokwayo ukukhusela ikhaya lethu, zisinike ukhetho oluphantse lube sisinyanzelo lokubhalisela inkonzo yabo ye-iCloud yokugcina idatha, kule meko. nge-eufy Dual Camera awudingi rhuma kuyo nantoni na kuba yongeza ukugcinwa kwisiseko ngokwayo kunye nendawo.
1 Uyilo kunye neempawu eziphambili zekhamera
2 Ukufakwa kwekhamera emnyango wendlu
3 Ukuzimela kwekhamera malunga neenyanga ezintandathu
4 Usetyenziso lwe-Eufy, ukuhambelana nezinye iikhamera kunye neemveliso ze-Alexa
Uyilo kunye neempawu eziphambili zekhamera
Asinakukhanyela ukuba uyilo lwale khamera luyamangalisa ngenene kwaye lunika ithuba lokuxhonywa naphi na ngenxa ukumelana namanzi, uthuli kunye nezinye imozulu embi. Ikhamera inoyilo olude, olumnyama olumenyezelayo.
Kwiimarike kukho olu hlobo lwezitampu ezifana ne eufy ikhamera ezimbini kodwa kule meko sithande kakhulu ukugqitywa kwegolide kwendawo apho ilensi ikhona kwaye enye yonke imnyama. Into engalunganga yokuthetha into malunga nale khamera kukuba iqhosha lentsimbi yocango lifihliwe. Oku kunokukhokelela abantu abafuna ukunkqonkqoza emnyango ukuba bathandabuze, kuba bekuya kuba kuhle ukubeka uhlobo oluthile lokumakisha intsimbi kwindawo ejikelezileyo yeqhosha ukuchonga ngokucacileyo le chime. Le iya kuba kuphela kwenqaku elibi esilifumene kwikhamera ebekwe ngaphandle kwendlu yethu.
Ngokuphathelele iingenelo okanye iingenelo eziphambili, kufuneka sitsho i-lens engundoqo inika isisombululo I-2K HDR ngelixa eyesibini yi-1600 x 1200 HD. Ibonelela ngokujongwa kwazo zonke iintlobo ngokuchongwa kwabantu ukusuka kwezona nkcukacha zincinci zibulela kwiskena sobuso kunye nokukhetha ukongeza iimpawu zezalamane zethu nge-app. Uluhlu lwayo oluguquguqukayo oluphezulu luvumela ukubonwa kobuso kunye nevidiyo yabantu nangona i-backlit ingabonwa ngokucacileyo.
Umbono onikezelwa ngezinye iikhamera ezihlakaniphile kunye neentsimbi zomnyango zilungile, ii-angles ezilolu hlobo lwekhamera zibalulekile kuba zisivumela ukuba sibone yonke into eyenzekayo ngaphandle kwendlu yethu. Ngokusengqiqweni le ntsimbi yasecangweni yevidiyo inomakrofoni kunye nesithethi ukukwazi ukunxibelelana ngokuthe ngqo nabantu abangaphandle. Kwelinye icala, ibonelela ngokuchongwa kwentshukumo kunye nokuchongwa kobushushu, okungeyomfuneko ngokwenene apha eSpain kodwa kuluncedo kakhulu eUnited States.
Thenga apha i-Eufy Dual Camera yakho ngexabiso elifanelekileyo
Ukufakwa kwekhamera emnyango wendlu
Ngale ndlela sinokuthi ukufakwa kwale ntsimbi yomnyango wevidiyo kulula kakhulu kwaye Sine template kwibhokisi ngokwayo eya kuququzelela ukufakwa. Oku kuqulunqwe ngokuthe ngqo kwimingxuma emibini yezikrufu ezimbini apho kuya kufuneka ukuba senze umngxuma eludongeni nge-drill. Akunzimanga kwaphela ukufaka le khamera ngaphandle.
Isiseko esibizwa ngokuba yiHomeBase 2 eyongeziweyo kwindlu yale khamera okanye i-video emnyango kufuneka idityaniswe kwinethiwekhi ye-Wi-Fi yekhaya lethu, oku kubalulekile ukufumana umqondiso wevidiyo olungileyo kwikhamera yangaphandle kwaye sinokuthi uluhlu lufanelekile. ezinye iimeko. Kwezi meko, xa isiginali ilungile ngandlel’ ithile, inkcazo yekhamera iya kuhla kancinci, ke sicebisa ukuba isiseko sibekwe kufutshane kangangoko kwintsimbi yomnyango ukuze yonke into isebenze ngokugqibeleleyo kunye nomgangatho ophezulu wevidiyo.
Ukuzimela kwekhamera malunga neenyanga ezintandathu
Kwibhokisi ngokwayo, ikhebula longezwa elingekude ngokwaneleyo ukuba likwazi ukudibanisa i-doorbell yevidiyo ngokuthe ngqo kwi-socket ye-USB A nje ngokuba sinombhobho eludongeni, kodwa oku akunjalo. Kungenxa yoko Ikhamera ibonelela ngokuzimela kanye xa ihlawuliswe ukuya kuthi ga kwiinyanga ezintandathu njengoko kubonisiwe ngumenzi. Oku ngokusengqiqweni kunokuxhomekeka kusetyenziso esilunika ikhamera, inani lamaxesha esiqhagamshela kuyo okanye ukucinezela intsimbi yokungena emnyango, njl.
Into esicacileyo ngayo kukuba ukuzimela kwekhamera kungaphezulu kokwaneleyo ukuzola. Ngale ndlela, asikhange sibekho ixesha elide ngokwaneleyo ukutsho ukuba ibhetri iphelile na okanye ayiphelanga, kodwa ngelixesha siyivavanyeyo, isebenze ngokugqibeleleyo.
Usetyenziso lwe-Eufy, ukuhambelana nezinye iikhamera kunye neemveliso ze-Alexa
Ngapha koko, le femu ineemveliso ezininzi ezifanayo ezikhoyo kwaye ukhetho lokukwazi ukuzinxibelelanisa enye kwenye luhle kakhulu. Singabona zonke iikhamera ngokuthe ngqo kwisicelo sethu seselfowuni naphi na kwaye esinika uxolo lwengqondo olugqwesileyo kumsebenzisi.
Namhlanje ekuphela kwengxaki esinayo kukuba uninzi lwethu alunazo iimveliso zohlobo olufanayo kodwa yiyo loo nto i-Eufy isinika ithuba lokonwabela le khamera kunye neenketho zayo kunye nezinye izixhobo ze-Alexa okanye zikaGoogle. ayihambelani neKhayaKit Ngelishwa.
Ngale ndlela sinokuthi siyakwazi ukunxibelelana naso nasiphi na isixhobo esihambelana ne-Alexa ukuze izithethi zisazise xa umntu ekhala intsimbi yokungena emnyango okanye sinokukhetha ukubabona ngezixhobo Yiba nesikrini saseAmazon.
Iinketho kunye neempawu ezinikezelayo zinomdla ngokwenene kuye nawuphi na umsebenzisi ofuna ukukhuselwa rhoqo ekhaya, ebona okwenzekayo ngaphandle ngamaxesha onke kunye nokuthembela ekusebenzeni kunye nokuzinza kolu hlobo lwemveliso yokhuseleko olusebenzayo.
eufy ikhamera ezimbini
Ithunyelwe nge: 28 April 2022
Utshintsho lokugqibela: 28 April 2022
Uyilo, izixhobo kunye nokhuseleko
Iyonke ukucaca kwevidiyo
Iimpawu, ixabiso kunye nokugcinwa kwe-iCloud kubandakanyiwe
Iqhosha lentsimbi yokungena emnyango elingenakuchazwa labanye abantu
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Izixhobo » Uphononongo lwe-Eufy Dual Camera Smart Doorbell
Ii-AirTags zakho ziya kuhlaziywa kwiintsuku ezimbalwa ezizayo kwi-firmware 1.0.301